Ciidanka NISA oo howlgal ku qabtay Saraakiil & Waxyaabaha qarxa | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Ciidanka NISA oo howlgal ku qabtay Saraakiil & Waxyaabaha qarxa
Ciidamada ammaanka gaar ahaan Ciidanka Hubaysan ee Duufaan ee NISA ayaa howlgal bartilmaameedkiisu qorshaysnaa waxaa ay ka fuliyeen Xaafada Suuqa Xoolaha ee degmada Heliwaa ee Gobolka Banaadir.
Howlgalka ayaa saraakiisha hoggaamineysay waxaa ay sheegeen in lagu soo qabtay saddex Sarkaal oo ka tirsanaa Ururka Al-Shabaab, kuwaas oo ku sugnaa meelo kamid ah xaafada Suuqa Xoolaha.
Sidoo kale waxaa ay sheegeen in Halwgalka qorsheysnaa oo ay fuliyeen Ciidanka NISA ku soo qabteen Keydkii Hubka ee ugu weynaa ee Al-Shabaab, kaasoo oo ka koobnaa noocyada kala duwan ee hubka oo ay u adeegsanayeen inay ku sameeyaan qaraxyada lagu dhibaateeyo Shacabka.
” Waxaa mar walba mudan oo Ciidamada NISA aad ugu mahadcelinayaan Bulshada Soomaaliyeed oo haatan aad ula shaqeeyey laamaha Sirdoonka Qaranka ayaa lagu yiri” War kooban oo kasoo baxay Ciidanka Hubaysan ee Duufaan ee NISA.
Agabka hubka ah oo ay Ciidanka NISA ee Duufaan soo bandhigeen ayaa u muuqday mid ah hubka duugoobay ee la isticmaalayay tan iyo markii dagaalada sokeeye ay ka dhaceen Magaalada Muqsisho.
Tosobaadyadii la soo dhaafay ayaa Ciidanka Hubaysan ee Duufaan ee NISA waxaa ay howlgallo kala duwan ka sameeynayeen magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda, waxaana howlgallada lagu soo qabtay Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab.